Sheekada filimka Simran: Kangana oo markale saameyn la timid iyo filim la daawan karo | Filimside.net
Home » Sheekada Filimada » Sheekada filimka Simran: Kangana oo markale saameyn la timid iyo filim la daawan karo
Sheekada filimka Simran: Kangana oo markale saameyn la timid iyo filim la daawan karo
Kangana Ranaut wey soo laabatay waxaana maanta tiyaatarada loo saaray filimka ay hogaamiyaha ka tahay Simran waana filim hadal heyntiisa ay ka badatay xidigtaan muranada ay dhexda ka gashay.
Hadaba aan isla fiirino Kangana iyo filimkeeda Simran waxyaabaha laga yiri fariin ahaan iyo bandhig ahaan oo muhiim u noqon karo guusha ama guuldarada filimkaan.
Jilaayaasha filimkaan: Kangana Ranaut, Soham Shah, Manu Narayan, Aneesha Joshi, Rupinder Nagra, Mark Justice.
Muxuu ku wanaagsan Simran: marwalbo oo shaashada kasoo muuqato Kangana waa qasab inay saameyn la imaado mana kusii jirto doorkeeda Simran oo ay si qurux badan u sameesay iyo sidoo kale fariinta filimkaan oo si la fahmi karo loo dhigay.
Muxuu ku liitaa Simran: Muuqaalada qaar looma baahneyn waxaa wanaagsanedy in si wacan loo faafreebo sidoo kalena filimkaan malahan heeso sheekadiisa horey usii wadi karaan ama daawadayaasha soo jiidan karaan.
Daawo Ama Ha Daawanin: Simran waa filim Kangana u qaas ah, hadii aad taageero u tahay Kangana waa hubaal in filimkeeda ku raaxeesan doontid.
Fariinta Filimka Simran oo kooban: Praful Patel (Kangana Ranaut) waa garoob madax banaan oo jecel inay hormar gaarto kuna nool magaalada Atlanta ee dalka Mareekanka.
Waalidkeeda ayaa magaalada kula nool laakiin waxay jeceshahay inay kaligeed meel ku noolaato si noloshooda ay ugu madax banaanaato.
Praful Patel (Kangana Ranaut) waxay safar usoo galee magaalada Les Vegas si ay kaga qayb qaadato xaflad qaraabada dhigteen gaar ahaan wiil ay ilmo adeero yihiin.
Praful Patel (Kangana Ranaut) waxay qabatimee ama dabci ka dhiganee inay qamaarka cayaarto marka ay Las Vegas imaado kadibna waxay qaadeysaa wado qaldan oo nolol ahaan iyo hormar ahaan u wanaagsaneyn.
Praful Patel (Kangana Ranaut) waxay nolosha qamaarka la galeysaa meel xun ayadoo lacagta ay heesatay ka dhamaaneyso kadibna deemo kala duwan qaadaneyso.
Marka ay meel u baxsato weyso waxay bilaabeysaa inay bangiyada dhacdo si xariiftnimo ku dheehan, kadibna nolosheeda ayaa sii qasmeyso halisna sii galeyso.
Maxaa laga yiri fariinta filimka Simran: Director Hansal Mehta wuxuu caan ku ahaa sameynta aflaanta fariinta adag xambaarsan sida SHAHID, CITYLIGHT iyo ALIGARH.
Laakiin markaan wuxuu doortay Simran oo ah xeerkii aan lagu baranin madaama uu doortay fariin sahlan oo la fahmi karo balse kaga baahneyd inuu aad uga taxadiro isku daba ridka mashruucaan.
Hansal Mehta wuxuu aad ugu guuleestay dhisada iyo tayeynta doorka Kangana malahaa atirishadan dhaliisheeda ayuu ka cabsanaayay balse filimkiisa dhamaan dadka kale ee ku jiraan wuu hilmaamay inuu tayeeyo doorarkooda!
Sidaa darteed Simran waa filim Kangana kaliya loo daawan karo mana ahan arin ku qasbi karto daawadayaasha kale ee dhex dhexaadka ah inay usoo daawasho tagaan.
Bandhiga Jilaayaasha: Queen kadib Kangana waxaa la islahaa filim ka bandhig wanaagsan ma sameyn karto, laakiin Simran ayay hada ku faani kartaa sida ay xidigtaan u jishay.
Simran waxay ku muujisay haba iska muran badnaato xidigtaan in doorka loo dhiibo inay wax kale ka dhigi karto xirfad dheerad ah iyo kalsooni weyn doorarkeeda siin karto.
Gunaanad: Simran waa film aad iska dhaafi kartid daawashadiisa hadii aadan Kangana taageero u ahayn, waayo filimkaan oo dhan Kangana ayaa ku saleesan yahay door ahaan iyo sida sheekada loo dhigay.
Dhanka Boxoffice-ka waxay u badan tahay in tiyaatarada daqliyada badan laga helo Multiplex filimkaan ka gadmi doono balse sida guud ma noqon karo filim meel walbo laga daawado.
Dadka filimada ka faaloodaan cel celis ahaan waxay siiyeen 2.5/5 taasi oo ka dhigan in mashruucaan sheekadiisa iska dhex dhexaad tahay kaliyana Kangana loo daawan karo.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Simran:
Waxaa Aqrisay 901
One Response to Sheekada filimka Simran: Kangana oo markale saameyn la timid iyo filim la daawan karo